'Mootummaan majiliisa ykn koree fala barbaadduu miti hawwaasa Musiliimaa deggera' - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Waajira Ministira Mummee
Goodayyaa suuraa Namoonni Majlisaafi koree fala barbaadduu wayita wal dubbisan.
Kibxata darbe masaraa mootummaatti mariin dhimma hawaasa muslimaa ilaallattu taasifameera.
Akka dubbii himaafi miseensi Koree Fala Barabaaddu Hawaasa Musliimaa Uztaaz Ahmaddiin Jabal jedhanittii haajaan xiyyeefannoon itti kennamee mari'atame dhimma 'Majiliisaa' kan mana maree dhimma Islaamummaa Itoophiyaa irratti gaaffii hawaasa musliimaa ta'e ka'aa turedha.
Uummanni nama barbaadu filachuu dhabuufi mootummaan dhimma amantaa keessa harka galchaa jiraachuun furmaata akka argatuuf bal'inaan ibsinee jedhan Ustaaz Ahmaddiin Jabal.
Namoonni amma jiran kaafamuun majiliisnii ce'umsaa ji'a jahaaf yookiin waggaa tokkoof dhaabbatee sana booda uummatni gara filannoo barbaaduutti akka adeemuufi hawaasa musliimaa biyyattii '' miiliyoona 50 tahuu mijiiliisa cimaa barbaadaa'' yaadni jedhu haasa'ameera jedhan Obbo Ahimaddiin.
Mana maree dhimma Islaamummaa Itoophiyaa ykn majiliisa jedhamuufi hordoftoota amantootaa gidduutti yeroo hedduu mormiin ture.
Uztaaz Ahmaddiin Jabal dabalatee ,Miseensonni koree fala barbaadduu hawaasa Musliimaa illee hidhamanii turan.
Ummanni nama barbaadu filachuu hin dandeenye, mootummaan harka keessa galcheera akkasumas akkitti Majiliisni hundaa'e ijoo dubbii ture.
Guyyaa kaleessaa majilisaafi miseensonni fala barbaadduu hawaasa musliimaa Ministira Muummee Dr. Abiy waliin qofa qofaa akkasumas boodarra marii waliin taasisanin koreen akka hundaa'u waliigalaniiru.
Walga'ii sanarratti yaadonni ijoon ka'an jedhu Uztaaz Ahmaddiin Jabal, majlisni ce'umsaa dhaabbachuu akka qabu, warri amma aangoorra jiran yoo aangoo gadi dhiisan eenyutu bakka bu'uu qabaa, akkaataan bakka bu'iinsaa akkam ta'uu akka qabuufi eessatti akka geggeeffamu kanneen jedhan.
Kana ilaaluuf maaliif koreen hin dhaabbanne jennee warra majilisaa, hawaasa muslimaa hundaafi namoota bilisa ta'an irraayis dabalamee walumatti koreen namoota sagal of keessaa qabu dhaabbatee ummata mariisisee fedhii ummata muslimaa akkamiin guutuu danda'aa kan jedhurrattis Ministira Muummee waliin mari'atanii walii galuu dubbatan.
Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahmad mootummaan ammaan booda amantaa keessa harka hin galchuu, kaleessas gochi mootummaan warra majilisaa deggeree warra kaan qoollifatee garaagarummaan uumamuuf yaalamaa ture sirrii akka hin taane dubbachuusaanii ibsaniiru Uztaaz Ahmaddiin.
''Ammaan booda mootummaan warra majilisarra jiran hin deggeru, koree fala barbaadduu hawaasa muslimaas hin deggeruu, mootummaan uummata muslimaa deggera , waan irraa eegamuun ummata muslimaa bira dhaabbachuu qaba'' jechuun ministirri muummee ejjennoo mootummaasaanii nuuf ibsaniiru jedhan Uztaaz Ahmaddiin.
Sochii koree kanaa duubatti hambisuuf majlisarraas ta'e karaa kamiinuu humnoota tikaa waliin quunnamtii gochuuf namni yaadu yoo jiraate mootummaan tarkaanfii madaalu akka fudhatullee ibsaniiru jedhan.
Walumaa galatti fedhiin ummataa kabajamuu akka qabu warra majilisaattis warra koree fala barbaadduu hawaasa muslimaattis ibsanii waliigalteedhaan gargar baaneerra jedhan Uztaaz Ahmaddiin Jabal.